सँखुवासभाकि बिमला राई विदेशमा रहेका प्रदेशीकै कारण हराईन्, छोरीले रूदै खोलिन् यस्तो रहस्य! (भिडियो हेर्नुस्) – Taja Khawar
सँखुवासभाकि बिमला राई विदेशमा रहेका प्रदेशीकै कारण हराईन्, छोरीले रूदै खोलिन् यस्तो रहस्य! (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ३१, २०७८ समय: १८:१८:२०
एजेन्सी । नेपालमा यतिबेला कोरोना महामारीले घेरिरहेको छ । यस्तो समयमा पनि घर बाहिर निस्कन समेत नपाईने अवस्थामा पनि सँखुवासभामा भने एक महिला हराएकि छिन् । श्रीमान कामका शिलशिलामा घर बाहिर काठमाण्डाैं तिर रहने र उनि चै बिदेशमा रहेका एक युवासँग फोनमा हरेक दिन कुरा गर्ने गरेकाे कुरा छोरीले नै भनेकि छिन् ।
यतिबेला हराएकि महिला सँखुवासभा जिल्ला धर्मदेवी नगरपालिका वडा नम्बर ५, नर्सरी चोककि विमला राई बिगत एक हप्तादेखि सम्पर्कबिहिन हुनभएकि छिन् । उहाँ हराएको कुरा उनका श्रीमान बलबहादुर दर्नालले भिडियोमा नै सार्वजनिक गरेका छन् । दर्नालका अनुसार उहाँकि श्रीमति बिमला विदेशमा रहेका एक युवा तेज प्रदेशी राईका कारण घर छाडेर हिड्न परेकाे जनाएका छन् ।
दर्नालका अनुसार बिदेशमा रहेका राइले समय समयमा फोन गर्ने र विभिन्न प्रलोभन सहित धम्कि दिने समेत भएकाले श्रीमतिले घर छाड्न बाध्य भैएकाे समेत गुनासो गरेका छन् । यति मात्रै नभएर सानी छोरीले समेत आमाले बारम्बार त्यहि प्रदेशीसँग कुरा गरिरहने जानकारी दिएकि छिन् ।
श्रीमति हिडेदेखि श्रीमान दर्नाल निकै पीडामा हुनुहुन्छ भने उहाँले जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि आउनु म सम्हालेर राख्छु भन्दै अगाडि भन्नुहुन्छ कि मलाई कमाएर ल्याउनु घर म सम्हाल्छु भनेकि श्रीमतिले यसरी एक्कासी घर छाडेर हिडेपछि चिन्ताले पागल जस्तै बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनले जो कसैले देख्ने भेट्नेहरूले दर्नाललाई फोन गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
Last Updated on: May 14th, 2021 at 6:18 pm